Soo dejisan KMPlayer 1.6.2 – Android – Vessoft
Soo dejisan KMPlayer
KMPlayer – ciyaaryahan caan u ciyaaro files warbaahinta in tayo sare leh. Software waxay kaalmeysaa versions dambeeyay ee codecs in bixisaa loo maqli karo ee audio iyo video files qaabab badan. KMPlayer kuu ogolaanaya in aad si aad u yarayso ama u kordhiyaan xawaaraha playback ah, kursiga beddesho size of video, xakameeyo nuurka iyo xannibi shaashada si looga hortago in ay qasabno shil. KMPlayer ku jira navigation u munaasib u baadhaan xogta lagu kaydiyaa xasuusta gudaha ama dibadda ee qalabka. Software waxuu si ay ula qabsadaan orientation shaashadda, shid subtitles iyo maareeyo ciyaaryahanka isticmaalaya headset ah. KMPlayer sidoo kale macaamila KMP Connect iyo Google Drive daruur kaydinta.
Waxay abuurtaa maktabadda music ah
Habaysaa saldhigyo playback
Dhexgalka KMP Connect iyo Google Drive
KMPlayer Software la xiriira:
English, Deutsch, 中文, Русский... All-In-One Toolbox 5.3.5